Iftiin mucjiso lagu sheegay! - BBC News Somali
Iftiin mucjiso lagu sheegay!
Iftiin cajiib ah oo cabsigaliyay dadka ku nool gobolka Kaliforniya ee dalka Maraykanka ayaa mar danbe uun sharaxaad dheeraad ah laga bixiyay waxa uu ahaa.
Nuurkan ayaa waxaa lagu dul arkay deegaanka Orange iyo deegaanadda ku dhow dhow habeenimadii Sabtiga taas oo horseeday in warar ku tiri ku teen la isla dhexmaryo oo la xiriirta iftiinku halka uu ka yimid.
Madaxa ciidamada boliiska ayaa sheegay in iftiinkaasi uu ka yimid hub ay ciidamada baddu ku tijaabinayeen xeebaha gobolka Kalifoorniiya ee dalka Mareykanka. Saraakiisha saadaasha hawada ayaa ka digay in laga yaabo in howlo militari ay in deegaankaasi ay ka socdaan.
Sawiro fidiyow ah oo internetka la soo galiyay ayaa muujinaya iftiin kor u kacaya ka hor inta aan la arag nuur seddex geesood ah oo buluug ah oo kor u kacaya. Fidiyowyaal badan ayaa laga doobay iftiinkaas dhowr daqiiqadood.
Maalintii Jimcaha, Hay'adda Hagista Hawada ee Mareykanka ee FAA ayaa sheegtay in duulimaadyada habeenkii ee ku socda magaaladda Los Angeles iyo kuwa ka baxaya ay ka baaqsadaan in ay dulmaraan badda Basifiga ee Galbeedka ka ah gagida dayuuradaha oo ah mid labaad ee ugu mashquulka badan garoomada diyaaradaha ee dalka Maraykanka.
Hay'addu ma sheegin sababta khadka tuulimaadyada loo badelay, hase ahaatee waxay xuseen in howlo militari ay deegaankaa ka dhacayaa inta ku dhexeysa Khamiista iyo Jimcaha.
Warbaahinta gobolka Kaliforniya ayaa xaqiijiyay in iftiinkaai uu ka yimid gantaal aan gumuc laheyn oo ay ciidamada Badda ee Mareykanku qeybta gujisku ay tijaabinayeen.
Wargeys ayaa sheegay in iftiinka laga arkay gobolo fog fog oo ay ka mid yihiin Nevada iyo Arezone. Telefishinka CBS ee Las Angelo ayaa ku waramay in iftiinka laga arkay fagaan gaareysa 600km ee ku beegan waqooyiga magaaladda San Fransisco.